Maraykanka oo $45 Million oo doollar ku bixinaya la dagaalanka Al-shabaab. – Radio Daljir
Maraykanka oo $45 Million oo doollar ku bixinaya la dagaalanka Al-shabaab.
Washington, June 27 – Waraaqo Dukuminti ah oo ay heshay wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa lagu ogaaday in wadanka Maraykanku uu lacag dhan $ 45 million oo doolarka Maraykanka ah ku bixiniyo la dagaalanka maleeshiyada Alshabaab, waxana wararku intaa ku darayaan in lacagtaan oo qalab milleteri loo qoondeeyey nabad ilaaliyaasha Burundi iyo Uganda.
Maraykanka ayaa oo ka walaacsan calaaqaadka ka dhexeeya ururka Alshabaab iyo faraca Alqaacida ee jasiirada carbeed iyadoo dhawaan wadanka Maraykanku uu duqayn dhanka cirka ah u geystay degaan u dhow magaalada Kismayo.
Saraakiil maraykan ah oo uu kamidyahay madaxa soo socda ee Pentagon-ka ee Leon Panetta ayaa isha ku haya Alshabaab waxana dhowaan Leon Panetta u sheegay sharci dejiyaasha maraykanka in kadib dilkii Usaama Binladen uu ururka Alqaacida si xun loogu wax yeeleeyey dalalka Afghanistan iyo Pakistan hase ahaatee uu qorsheynayo in uu usoo guuro gudaha wadanka fashilmay ee Somalia.
Pentagonka Maraykanka ayaa la xaqiijiyey in uu la dagaalanka A;-shabaab ka caawinayo labada dal ee Bururndi iyo Uganda oo ciidamo gaaraya 9000 ka joogaan Somalia, dalalkaakan ayaa lasiindoonaa qalabka Milleteri oo ay kamidyihiin gantaalaha garbaha laga rido qalabka jidhka ka difaaca rasaasta, qalabka wax lagu arko , qalabka isgaadhsiinta , qalab culus oo dhinaca dhismaha ah, dab dhaliyayaal iyo nidaamyada wax lagu basaaso ama lagu sahmiyo, waxaana intaa u raaca tababar heer sare ah.
Inta waxa dheer maraykanku waxa uu dalka Uganda u diridoonaa $ 4.4 million oo doollar oo loogu talagalay hawlaha isgaadhsiinta iyo qalabka injineerinka.
Gargaarkaan ayaa waxa uu kamidyahay $ 145.4 Million ee deeq iswatada ah oo ay saraakiisha Pentagon-ku ogolaadeen asbuucii hore islamarkaana loo diray Capitol Hill si arimaaha loo xaqiioyo intaan hawsha qaybinta iyo bixinta la bilaabin.
Wadanka maraykanka ayaa sanadkaan aan ku jirno bixinaya lacag gaadhaysa $ 350 Million oo doollar si loogula dagaalamo waxa loogu yeero argagaxisada.
pentagon-ka ayaa sanadkiiba bixiya ilaa 3 ama 4 qaybood oo ah lacag lagula dagaalamayo kooxaha argagaxisada ah, waxana horraantii sanadkaan la bixiyey lacag dhan $ 43 Million oo doolar ,iyadoo lacagtaan badi la gaarsiiyey dalka yemen oo kamid ah meelaha uu maraykankau siinayo mudnaanta kowaad si loola dagaalamo qolyaha mintidka ah.
Wadanka Yamen ayaa sanadkii hore ka helay Maraykanka lacag dhan $ 155 miliion oo doollar waxana sanadkaan saraakiisha Pentagon-ku tilmaameen in ay Yamen u qorsheeyeen lacag dhan ilaa $ 200 million oo doolar laakiin Maraykanka ayaa ka walaacsan mudaharaadyada bilaha socda ee wadankaasi ka jira.
Maraykanka ayaa sidoo kale lacago ugu talo galay wadamo dhawr ah oo ay ka hawlgalaan hawlwadeenada Al-Qaacida gaar ahaan dalka Maqrib Alislaami ama waqooyiga Africa .
Hadaba lacagaha maraykanku u qoondeeyey sanadkaan la dagaalanka waxa loogu yeero argagaxisada waxaa kamid ah:
? $22.6 million oo doolar oo loogu talagalay dalka Mauritania si looga caawiyo diyaaradaha ciidamada daabula, tababarada, Basaaska, dhismaha gegooyinka diyaaradaha IWM.
? $17.7 million doolar oo la siinayo dalka Jamhuuriyada Djibouti si looga caawiyo diyaaradaa , wadankaasi Djibouti oo uu ku yaalo saldhiga Militeri ee keliya ee uu maraykanku ku leeyahay qaaradaan Africa .
? $12.1 million oo doolar oo loogu talagalay horumarinta tababarada helicopter ?da ee Kenya.
? $1 million oo doolar oo loogu talagalay dalka Mali waxana wax lagaga qabanayaa miinooyinka.
Gargaarka la dagaalanka waxa loogu yeero argagaxisada ah ee uu maraykanku siinayo sanadkaan wadamada caalamka ayaa sidoo kale waxaa soo gelaya dalal kale oo dhawr ah oo ay ka mid yihiin Philippines , Maldives iyo kuwo kale laakiin waxaa xusid mudan in maraykanku uu Somalia meel cidla ah dhigay madaama lacagahaan aan waxba kasoo gaarayn iyadoo la sheegay in lacagaha la gelinayo dalalka ay ciidamadu ka joogaan dalka Somalia.
Dadka la socda siyaasada maraykanka eek u aadan Somalia ayaa sheegaya in maraykanka aysan ka go?nayn wax ka qabashada mushkilada Somalia, waxaana ay xusayaan in hadii loo baahanyahay in Somalia dhibka laga saaro ay mudantahay in gargaarka Marayakanka wax laga siiyo ciidamada qalabka sida ee wadanka Somalia ee iyagu dagaalka safka hore ah kula jira Alshabaab iyo jaalkooda Alqaacida.
Inkastoo dadka qaar muujinayaan in ciidamada Somalia aan la aaminikarin iyadoo laga baqanayo in agabka Militeri gelikaraan gacmaha kooxha mintidka ah, waxana taa dheer in maamulayaasha Dowlada dhexe ee Somalia iyo maamul goboleedyaduba ay yihiin kuwo aan hufnayn oo musuqmaasuqu la degay.
Maraykanka oo lagu dhaliilay kaalintiisa ku aadan Somalia ayaa waxaa la gudboon in uu wax ka qabto arimaha aan militeriga ahayn ee Somalia hadii uu ka gaws adaygay gacansiinta Ciidamada xooga dalka ee Somalia .